Bible Mu Nsɛm Ɔhene Salomo Nyansafo - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
NA SALOMO nnya nnii mfe aduonu bere a obedii hene. Na ɔdɔ Yehowa, na odii afotu pa a n’agya Dawid de maa no no akyi. Yehowa ani gyee Salomo ho, enti da koro anadwo ɔka kyerɛɛ no ɔdae mu sɛ: ‘Salomo, dɛn na wobɛpɛ sɛ mede ma wo?’
Ɛnna Salomo buae sɛ: ‘Yehowa me Nyankopɔn, meyɛ abofra, na minnim ɔman so hwɛ. Enti ma me nyansa na memfa nni wo man so yiye.’
Yehowa ani sɔɔ nea Salomo bisae no. Enti ɔkae sɛ: ‘Esiane sɛ woabisa nyansa na ɛnyɛ nkwa tenten anaa ahonyade nti, mɛma wo nyansa pii asen obiara a watra ase pɛn. Na mɛma wo nea woammisa no nso, ahonyade ne anuonyam.’
Eyi akyi bere tiaa bi no mmea baanu de asɛm bi a emu yɛ den baa Salomo anim. Wɔn mu biako kae sɛ: ‘Me ne ɔbea yi te fie biako. Mewoo ɔbabanin, na nnanu akyi no ɔno nso woo ɔbabanin. Na da koro anadwo ne ba no wui. Nanso bere a mada no, ɔde ne ba a wawu no bɛtoo me nkyɛn, na ɔfaa me ba no. Bere a mesɔree no mehwɛɛ abofra a wawu no na mihui sɛ ɛnyɛ me ba no.’
Ɛnna ɔbea biako no kae sɛ: ‘Dabi! Me ba no ne nea onwui no, nea wawu no yɛ ne dea!’ Ɔbea a odi kan no buae sɛ: ‘Dabi! Wo ba no na wawu no, na nea onwui no yɛ me dea!’ Mmea no kɔɔ so gyee akyinnye. Dɛn na Salomo bɛyɛ?
Ɔsomae sɛ wɔnkɔfa nkrante mmra, na bere a wɔde bae no, ɔkae sɛ: ‘Kyɛ abofra a onwui no mu abien, na fa ɔfã ma mmea no mu biara.’
Nea ɔba no yɛ ne de ankasa no teɛɛm sɛ: ‘Dabi! Mepa wo kyɛw, munnkum abofra no. Momfa mma no!’ Nanso ɔbea biako no kae sɛ: ‘Mommfa mma yɛn mu biara, monkyɛ mu.’
Afei Salomo kasae: ‘Munnkum abofra no. Momfa mma ɔbea a odi kan no. Ɔno ne abofra no nã ankasa.’ Salomo huu eyi efisɛ na abofra no nã ankasa dɔ abofra no araa ma na ɔpene so sɛ wɔde bɛma ɔbea biako no na wɔankum no. Bere a nkurɔfo no hui sɛnea Salomo dii asɛm no, wɔn ani gyei sɛ wɔanya ɔhene nyansafo a ɔte saa.
Salomo ahenni no mu no Onyankopɔn hyiraa ɔman no ma asase no sow awi ne atoko, bobe ne borɔdɔma ne nnuan afoforo pii. Nkurɔfo no nyaa ntade pa na wonyaa adan pa traa mu. Obiara nyaa nnepa pii.
1 Ahene 3:3-28; 4:29-34.
Dɛn na Yehowa bisaa Salomo, na mmuae bɛn na ɔde mae?
Esiane sɛ Yehowa ani gyee Salomo abisade no ho nti, dɛn na Yehowa hyɛɛ bɔ sɛ ɔde bɛma no?
Asɛm a emu yɛ den bɛn na mmea baanu bi de bɛtoo Salomo anim?
Sɛnea mfonini no kyerɛ no, ɔkwan bɛn na Salomo faa so dii asɛm no ho dwuma?
Salomo ahenni no te sɛ dɛn, na ɛyɛɛ dɛn na ɛbaa saa?
Kenkan 1 Ahene 3:3-28.
Dɛn na mmarima a wɔwɔ asɛyɛde wɔ Onyankopɔn ahyehyɛde mu nnɛ no betumi asua afi Salomo komam asɛm a ɛwɔ 1 Ahene 3:7 no mu? (Dw. 119:105; Mmeb. 3:5, 6)
Ɔkwan bɛn so na Salomo abisade no ma yehu nneɛma a ɛfata sɛ yɛbɔ ho mpae? (1 Ahe. 3:9, 11; Mmeb. 30:8, 9; 1 Yoh. 5:14)
Sɛ yɛhwɛ sɛnea Salomo dii mmea baanu no asɛm no a, awerɛhyem bɛn na ɛma yenya wɔ Salomo Ɔkɛseɛ, Yesu Kristo a obedi hene daakye no mu? (1 Ahe. 3:28; Yes. 9:6, 7; 11:2-4)
Kenkan 1 Ahene 4:29-34.
Yehowa buaa Salomo abisade a ɔde too n’anim sɛ ɔmma no ahobrɛase koma no dɛn? (1 Ahe. 4:29)
Sɛ wohwɛ sɛnea nkurɔfo bɔɔ mmɔden betiee Salomo nyansa no a, suban bɛn na ɛsɛ sɛ yenya de sua Onyankopɔn Asɛm? (1 Ahe. 4:29, 34; Yoh. 17:3; 2 Tim. 3:16)
Solomon Ho Bible Krataa
Twe Bible krataa yi bi na sua Ɔhene Solomon a ɔnim nyansa no ho ade.